Ka Adkaanshiyaha Naftu Waa Furaha Guusha - Xogside-news Xogside
Home BARNAAMIJYADA Ka adkaanshiyaha Naftu Waa Furaha Guusha
Ka adkaanshiyaha Naftu Waa Furaha Guusha
waxa laga yaabaa in mashaakilka iyo dhibaatooyinka haysta qofka ay ka bilaabanto naftiisa intaanay cid kale is arag, kadibna ay u gudubto dadka ku hareeraysan, taasina waxay markaste ka timaadaa in uu qofku awood u yeelan waayo sidii uu naftiisa uga adkaan lahaa.
Dadka badiyaaba nafahooga ka adag ayaa waxay kaligood awood u leeyihiin inay si dagan ula dhaqmaan dhibaatooyinkooda, qofkaste oo awood u yeesha inuu naftiisa xakameeyona waa qof is ku filan, waxa uu leeyahay iimaan adag iyo kalsooni uu iska qabo oo u sahlaysa guul kaste oo uu ku hammiyo.
10 arimood oo kuu fududaynaya sidii aad uga adkaan lahayd naftaada.
Naftaada ku khasab inaad akhridid muddo cayiman maalin kaste, tusaale ahaan aynu nidhaahno waxaad ka bilawdaa inaad 30 daqiiqo akhridid, halkan ayaad ka bilaabi kartaa inaad naftaada ku khasabtid wax akhris duruuf kastaaba ha kugu hareeraysnaatee.
Naftaada ku khasab inaad tukatid 5-ta salaadood ee maalinkaste, si kastoo ay duruuftu ahaataba xataa markaad caajis dareemayso waa inaad tukataa, waxa ku jira arinkan laba faadio, inaad ajar ka heshid markaad gudatid waajibka Allah ku faray, iyo inaad naftaada edeb ugu samaysid salaada.
Seexo saacad xadidan maalin maalmaha kamid ah oo cayiman, tusaale ahaan aynu nidhaahno waxaad seexataa maalin kaste oo salaasa ah 9 habeenimo, waxaana waajib kugu ah inaad marka aad xadid maalinta iyo saacada aanaad ka bixin ballankaa aad naftaada la gashay.
Naftaada ku khasab nooc kamid ah cuntada maalim cayiman, tusaale ahaan ha cunin khudaar maalinta arbacada, si kaste oo aad u heli kartid khudaartaas.
Soco muddo 10 daqiiqo ah maalinksate, mudadu ma dheera laakin naftaada ku khasab inaad socotid muddadaas maalin kaste si kaste oo waqtigu kuugu yaraado.
Kasoo bax gurigaaga adigoon mobile-kaaga sidan masaafo cayiman, halkan ayaa aad naftaada kula galaysaa dagaal, iyada oo aad ka warwaraysid mobile-kaaga iyo yaa kusoo wici doona gaar ahaan hadaad tahay dadka shaqada badan, balse hadii aad muddo sidaas ku wado waxaad arki doontaa adiga oo naftaada kasoo adkaanaya, wiigiiba mar tijaabi arinkan kadibna natiijada fiiri.
daawo barnaamij caajis ah (boring) muddo 10 daqiiqo ah.
Samee shaqo aad hore uga qaban jirin guriga, sida inaad samayso jimicsi, amaba aad nadiifisid gurigaaga si kate oo shaqaale hawshan loo xil saaray uu u jiro.
Isku day inaad qortid waxaad la kulantid maalin kaste, samee sidan muddo bil ah adigoo ku qoraya buug u gaar ah.
Diid wax aad jeceshahay inaad qabatid todobaad kaste maalin kamid ah, tusaale ahaan haad taha dadka jecel inay Cemina-ha tagaan wiig kaste jooji todobaad kamid ah todobaaddada inaad tagtid sinimooga, hadii aad todobaadka ku xiga aragtid xalwad aad jeceshahay naftaada u diid inaad iibsatid.
Hadi aad Joogtayso 8 Qodob waxad noqon kartaa Muslim Guulaystay Aduun iyo Akhiraba
Guushu Marba waxay ku timaada waxad Holoto ”desire” ku tahay, Guusha Muslim kuna maaha oo keliya Aduunyada sidoo kale waa Aduun iyo Akhiraba.
Binu Adem ka qaarkoood wadada guuusha way baqaan cabsi guularada ka qabaan awgeed, lakiin hadii ad si dhaba u milicsato aduun iyo akhiraba hawli kama dhamaato wax walbana dhib iyo dheefba waa leeyihiin lakiiin inta lagu kala tegay waa ‘isku day iyo adkaysi dhiiirasho leh’.
Waxay ku noolanahay duni ikhtiyaarkaaga ama ‘Choice kaga’ gacanta ku jirto sida ad u maamulatana uun kuugu soo baxayso. Sida la mid ah dad Islam waxay leeyihin nolol xadaysan sida sharci Islam wuxu inoo sheegay in Ilaahay wax inoo banayey ku samo falkooda dhankalana wax inaga reebay samayntooda tusaale ahaan Haram iyo Halal, iyadooo sida tahay aya hadana waxad gacanta kugu jirta qaab nololeed ka ad u maamulayso noloshaada qofnimo.
Dhan kale, waxa muhiim inaad kala saarto ama kala garato wax yaalaha guusha kuu horseedi kara iyo kuwa an horseedi karin kow, Quran akhriska malinkata inta ad awooowdo sababtoo ah akhriska Quran Allah waxad helaysa rahmad naxariis iyo deganansho
Laba, Salada oo ad xiligeeda tukado, fiiro gaara Islamic law waxay u kala baxda afar, Salaad ‘worship’, Muamalat, ‘realationship between man to men’, Qisas ka dadka ‘criminal laws’ iyo family marriage’ Allah s.w.a wuxu u horayseey salada waxa weeye Allah aya yidhi binu adem umaan abuurin inay i caabudaan moooyaane markaa guul raadiyaw salaada cidinga ku hay goor kasta iyo xili kasta.
Sadex, Sunnah Nebigeena Muhammad s.a.w oo ad joogtaysay
Afar, Adkaarta oo ad akhriskeeda joogtayso Subaxii iyo galabtii, oo akhriso waayo waxay ku sahli karta guusha inad gaadho muraad ad nolosha ka leedahayna Allah kuu qumiyo & denbi dhaaf.
Shan, Nafta oo ad ku ilaaliso, akhris bookta, barashada taarikhda aduun soo maray iyo weliba jimicsiga sida orod,cuntada fudud intuba waxay ku safaynayaa machine keliya ee ad ku nooshahay oo ah qalbiga.
Lix, Xidhiidh Qoyskaaga, waxay kaa saacida inaad noqoto qof moral ahaan dhisan waqtiga la qaadashada ayaa u guul ah caruur iyo ciroolaba.
Todoba, Sadaqada oo ad la baxdo iyaduna miiisaan ka xasanad ayay kordhisaa
Sideed, Allah oo ad denbi dhaaf ka dalabto mar walba, waayo binu adem ayaynu nahay waa danbaabi karnaa si tooosa iyo si an tooosayn ahayn marka mar walba ku xidhnaw Allah si uu isna kuu xasuuusnaado.
Gunti iyo gunaadkii samaynta ama ku camal falka qodobadan an sare kusoo xusay waxay kuu fududaynaysaa wadaada guuusha Aduun iyo Akhiaraba. Allah ha inagu sugo wadada sugan
Previous articleAstaamaha Dadka Naxariista Badan
Next articleFaysal oo sheegay inaanu wareejinayn gudoomiyaha xisbiga UCID